မြန်မာဗေဒင် | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
မြန်မာဗေဒင်	# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင်Published August 22, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
“လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင်” (Quick Baydin) ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍသစ်လေးကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာ လူတွေ အမေးအမြန်း များတတ်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒီအထဲက ကိုယ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းရှိရင် “Click” တစ်ချက်နှိပ်ပြီး မေးလိုက်ရုံပါဘဲ။ မွေးသက္ကရာဇ် မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီတွက်ချက်နည်းက Randomize အပေါ်မှာ အခြေခံထားတာဖြစ်လို့ မေးခွန်းတစ်ခုကို (၂)ခါမေးလို့ မရပါဘူး။ (၂)ခါ (၃)ခါ ထပ်မေးလို့ မေးခွန်းတွေ ကွဲလွဲနေရင် “ပထမဆုံး” ထွက်လာတဲ့ အဖြေကသာ အတည်ဖြစ်ပါတယ်။
အပျော်မေးရင်တော့ “အပျော်တမ်းဗေဒင်” ဖြစ်သွားပါမယ်။ အပျင်းပြေမေးရင် “အပျင်းပြေ ဗေဒင်” ဖြစ်သွားပါမယ်။ ယုံကြည်စိတ်နဲ့ မေးရင်တော့ “တကယ်မှန်တဲ့ ဗေဒင်” ဖြစ်သွားပါမယ်။ တကယ် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ မေးရင် လက်ဖျားခါလောက်အောင် မှန်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တွေ့ တွေ့လာရလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် တကယ် သိလိုစိတ်ရှိမှ မေးပါ။ အပျင်းပြေ မမေးပါနဲ့ ။ တစ်နေ့ကို မေးခွန်း (၃)ခုထက် ပိုမေးရင် နောက်ပိုင်း မေးခွန်းတွေ သိပ်ကြီးမမှန်နိုင်တော့ပါ။ မေးခွန်းများလေ၊ အမှားများလေ ဖြစ်မယ်။ ဒီဝက်ဆိုဒ် ရှိနေသရွေ့ အချိန်မရွေး လာမေးလို့ ရပါတယ်။ တစ်နေ့ကို (၃) ခုကနေ အများဆုံး (၅)ခုလောက် အထိ ဘဲ မေးစေချင်ပါတယ်။
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ အပျင်းပြေ လျှောက်နှိပ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း နှိပ်ကြည့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းတစ်ခုအတွက် “ပထမဆုံး” ပေါ်လာတဲ့ အဖြေက အတည်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့။ နောက်ထပ် ဘယ်လောက် အဖြေမူကွဲတွေ ပေါ်ပေါ် ပထမဆုံး နှိပ်လိုက်လို့ ပေါ်လာတဲ့ အဖြေကဘဲ အမှန်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ နောက်ပိုင်းကိုယ်တွေ့ကြုံလာရင် သိလာရလိမ့်မယ်။ ကဲ – မေးလို့ရမယ့် မေးခွန်းကဏ္ဍလေးတွေကို ကြည့်ကြရအောင်။
Posted in ဟူးရားဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, လျှပ်တစ်ပြက် ဗေဒင်, ဟူးရား ဗေဒင်, အပျော်တမ်း ဗေဒင်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# ကျမ်းလျှောက်လျှင် မဆုံး၊ ကျမ်းပေါက်လျှင် တစ်လုံးPublished July 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
အခုတစ်လော ဗေဒင်ပညာဆိုင်ရာ ဘလော့ဂ် “ဈေးတန်း” လေးထဲမှာ ပွက်ညံပွက်ညံ နဲ့ ပွဲဆူနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီပွဲဈေးတန်းလေး ထဲမှာ “အသက်အကြီးဆုံး” ဖြစ်တော့ ဘယ်သူက မှားတယ်/ဘယ်သူက မှန်တယ် ဆိုတာ ၀င်ငြင်းစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ ၀င်ခြင်းဝင်ရင် လူကြီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀င်ပြီးဖြန်ဖြေဖို့သာ ရှိပါတယ်။ အားလုံးကို ပြောချင်တာက သင့်မြတ်ကြပါဗျာ။ လူကဲ့ရဲ့စရာ ဖြစ်နေပါဦးမယ်။ တစ်ခါက ကျွန်တော့်ကို “ကိုတေးအေးရိပ်” ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလေး တစ်ခုကို ပြန်ပြောရဦးမယ်။
အဲဒီ ရက်ပိုင်းတွေက ဘလော့တွေထဲမှာ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း လျှောက်ဆဲနေတဲ့ ကိစ္စလေး တစ်ခု ဖြစ်ပွားနေချိန်ကပေါ့။ (ကိုဝေသာလီရဲ့ ဆိုဒ်ထဲမှာပါ)။ ကျွန်တော်လည်း ကြိုတင် ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ C-box ကို ဖြုတ်ချလိုက်တယ်။ ကြောက်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီ စကားလုံးတွေကို “မမြင်ဝံ့၊ မကြားဝံ့” လို့ပါ။ ဒီဝက်ဘ်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ယောင်္ကျားလေးတွေချည်းဘဲ ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။ မိန်းကလေး တွေလည်း အများကြီးမဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်ပါ။ သမီးချင်း၊ နှမချင်း စာနာစိတ်နဲ့ပါ။
ကိုတေးအေးရိပ်လည်း C-box ကို မဖြုတ်ပေမယ့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့ Proxy တွေကို Ban လိုက်တယ်နဲ့ တူတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ C-box ထဲကို (ခါတိုင်းလိုဘဲ) ၀င်ရေးတော့ ကျွန်တော့်ကို Ban ထားတာ ခံလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော် တော်တော် ဒေါသထွက်သွားတယ်ဗျ။ ဘယ်နှယ့်ဗျာ – ဒီလို ညစ်ညစ် ညမ်းညမ်း အဓိပ္ပါယ်မရှိ လိုက်ဆဲနေတဲ့လူလို့ သံသယ ဖြစ်ဖွယ်စာရင်းထဲမှာ ကျွန်တော်လို လူမျိုး ပါသင့်သလားပေါ့။ ဒေါသထွက်လိုက်တာလေ။ ကျွန်တော် ဆိုတဲ့ အကောင်ကလည်း အသက်သာ ကြီးလာတာ “ထစ်ကနဲ” ဆို ဒေါသ အင်မတန်ထွက်လွယ်တဲ့ လူမျိုးခင်ဗျ။ ဘာရမလဲ။ အီးမေးလ် နဲ့ စာရေးပြီး တေးအေးရိပ်ကို ချဲတော့တာပေါ့။
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ၁၉ ဂျူလိုင် အမှတ်တရ . .Published July 19, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	မိမိကိုယ်တိုင် မြင်မသွားခဲ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက် လန်ဒန်မြို့တွင် အရေးဆိုခဲ့စဉ်က . .
(၆၃)နှစ်တောင်မှ ကြာညောင်းခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့ ဒီရက် လွန်ခဲ့တဲ့ (၆၃)နှစ်ဆီက မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးအတွက် လုံးဝ အစားထိုးလို့ မရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ တစ်ဖွဲ့လုံး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခံလိုက်ရတာပါဘဲ။ တစ်မျိုးသားလုံး ဖြေမဆည် နိုင်အောင် ကြေကွဲဝမ်းနဲ ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးမှာ သမိုင်းဖြစ်ရပ်ကို ရေးသားမှာ မဟုတ်ဘဲ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း” ရဲ့ နာမည် နဲ့ ကံကြမ္မာ တို့ကို မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်ပညာရပ် နဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်(Numerology) ရှုထောင့် များမှ သုံးသပ်တင်ပြလိုခြင်းသာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။
“ပေါက်ဖေါ်” လို့ ခေါ်ကြတဲ့ “ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို (ပြီးခါမှ) ဗေဒင် ပညာနဲ့ သုံးသပ်ကြတာဟာ အထင်ကြီးစရာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီလို အတိတ်က ကိစ္စတွေကို များများလေ့လာ သုံးသပ် နိုင်မှ အမှားနည်းပြီး အမှန်များလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ဟာ အနာဂါတ် အတွက် ဆရာကောင်းဘဲ မဟုတ်ပါလားဗျာ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ၁၉၁၅ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၃)ရက် (စနေနေ့) မှာ ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ “ရာဇ”ဖွား ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မဟာဘုတ် က (၂)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖြစ်ပါတယ်။
(၂)ကြွင်း မဟာဘုတ်တို့ရဲ့ ယေဘူယျ ဉာဉ်တွေအတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက -
- ခေါင်းမာတယ်။ တစ်ယူသန်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလွန်အမင်း ယုံကြည်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားတယ်။ သူများရဲ့ အကြံပေးစကားတွေကို မနာခံတတ်ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုသိပ် မစိုက်ဘူး။ အနေအထိုင် ဖြစ်သလို နေထိုင်တတ်တယ်။ အ၀တ်အစားကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် မ၀တ်ဘူး။ သူများကို အလွန်ကူညီတတ်မယ်။ မရှိ ရှိတာ နဲ့ ကူညီမယ်။ လက်အောက်ငယ်သားအပေါ် (အပြောကြမ်းတတ်)ပေမယ့် အလွန်ငဲ့ညှာ သနားတတ်တယ် . . . ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေ ရှိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ခေါင်းမာတဲ့ စရိုက် နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်လွန်ခြင်း ဆိုတဲ့ စိတ်ထားတွေကြောင့် လုံခြုံရေး အစောင့်အရှောက်ရယ် လို့ ဟုတ်တိ ပတ်တိ မထားခဲ့ တာဟာ ရန်သူတွေကို အလွန်လွယ်ကူစွာ လုပ်ကြံနိုင်စေဖို့ ဖန်တီးပေးသလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး ရာဇဖွား။ ဘယ်အကြွင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ရာဇဖွားမှန်ရင် “ထက်မြက်ခြင်း၊ ပြတ်သားခြင်း၊ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ မြင့်မားခြင်း၊ တုန်းတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် ပြုလုပ်တတ်ခြင်း၊ သူရသတ္တိနဲ့ ပြည့်စုံခြင်း” စ,တဲ့ သဘာဝတွေ ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး သင်္ချာဗေဒ (ဂဏန်းဗေဒင်) ရှုထောင့်က ကြည့်တောလည်း (13)ရက် ဆိုတော့ (4) ဂဏန်း သမား။ “(4)ဂဏန်း သမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း” ဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့သလိုဘဲ (4)ဂဏန်းဟာ တော်တော်ဆန်းကြယ်တဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုပါ။ (4) ဂဏန်းသမားတွေဟာ လူ့လောကထဲမှာ တော်တော်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားကြတာ များပါတယ်။ အရည်အချင်းလည်း ရှိကြတယ်။ ပါးနပ်တယ်။ သိလွယ်တတ်လွယ်တယ်။ အတိတ် ပါရမီဓာတ်ခံ တစ်ခုခု ရှိတတ်တယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (13)ရက်နေ့ဟာ သာယနစနစ်မှာ တနင်္ဂနွေ “ကုံ” ရာသီမှာ တည်ရှိနေတာကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ဟာ “ကုံ” ရာသီဖွား ဖြစ်ပါ တယ်။ “ကုံ” ရာသီရုပ်ဟာ “ရေထမ်းသမား ရေအိုးထဲမှ ရေများကို သွန်လောင်းချနေတဲ့ ပုံ” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီခွင် ရုပ်ပုံကို သရုပ်ဖော်ကြည့်ရင် ကုံရာသီသမားတွေဟာ -
“စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ အနစ်နာခံခြင်း၊ မိမိလုပ်သမျှ ကိုင်သမျှ အချည်းအနှီးဖြစ်ခြင်း၊ သဲထဲရေသွန် ဖြစ်ခြင်း၊ မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း မိမိပြန်မခံစားရခြင်း၊ အဆုံး သတ်မကောင်းလှခြင်း စတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိတဲ့ ရာသီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် “ကုံ” ရာသီဖွား (13)ဂဏန်းသမားဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မိမိရဲ့ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှု များရဲ့ အသီးအပွင့်များကို မြင်ပင် မမြင်လိုက်ရဘဲ ၀မ်းနည်း ကြေကွဲဖွယ်ရာ ကွယ်လွန် သွားရခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
“ကုံ” ရာသီဟာ ခေတ်သစ် သင်္ချာဗေဒမှာ “ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်(4)ဂဏန်း” ပိုင်တဲ့ “ကသစ်” အိမ် ဖြစ်လို့ သူ့ပိုင်တဲ့ အိမ်မှာ သူရပ်တည်တဲ့ (13)ဂဏန်းဟာ ဒီနေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အလွန်ထက်မြက်တဲ့ စွမ်းရည်၊ အရည်အချင်းတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တာ မဆန်းလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ချက်က “သူ” ဟာ “စနေ” သား ဖြစ်နေပြန်တယ်။ (4)ဂဏန်း ပိုင်တဲ့ ယူရေးနပ် ဂြိုဟ် နဲ့ စနေဂြိုဟ် တို့ဟာ တကယ့် ကမ္ဘာရန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို (4)ဂဏန်းသမားတစ်ယောက်ဟာ ရန်ဂြိုဟ်ဖြစ်တဲ့ စနေနေ့မျိုးမှာမွေးဖွားလာရင် သူတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးဟာ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု မရှိတော့ဘဲ “ပဋိပက္ခ” ဖြစ်စဉ်တွေ နဲ့ အမြဲလိုလို ရင်ဆိုင်နေရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အရာရာကို အလွယ်တကူ နဲ့ ရလေ့မရှိဘဲ “တိုက်ယူမှ ရသူတွေ” ဖြစ်တယ်။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေမှုတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိတယ်။
Numerology ပညာအရ ဗိုလ်ချုပ်ကို “သတ်” လိုက်တဲ့ ဂြိုဟ်ဟာ (13)ဂဏန်း ဖြစ်တယ်လို့ တစ်ချို့က ယူဆကြပါတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ “သေမင်း” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး လူအများ ကြောက်ကြတဲ့ (13)ဂဏန်းဟာ အခြားသူများကိုတော့ “သတ်ချင်သတ်မယ်” ။ ကိုယ့်မွေးဂဏန်း ပိုင်ရှင်ကိုတော့ သတ်လေ့မရှိပါဘူး။
Numerology ပညာအရ ဗိုလ်ချုပ်ကို အသေသတ်လိုက်တာကတော့ “သင်္ချာဗေဒပညာ” ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Current of Destiny” ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ 1915 ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားတော့ သူ့ရဲ့ Current က (16)ဂဏန်း ဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ “Current of Destiny” ဆိုတာ “တားရော့” ပညာပါဘဲ။ တားရော့ဗေဒင်မှာ (16)ဆိုတဲ့ ဂဏန်းဟာ လူတစ်ယောက် မျှော်စင်ပေါ်ကနေ မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး ပြုတ်ကျလာတဲ့ နိမိတ်ပုံပါ။
ဒီ နိမိတ်ပုံဟာ မျှော်စင်ဆိုတဲ့ အထွဋ်အထွပ်ကို ရောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မိုးကြိုးပစ်ချခံလိုက်ရတာဆိုတော့ “အမြင့်ဆုံးကို ရောက်နေစဉ်မှာ ပြုတ်ကျခြင်း၊ မီး လျှပ်စစ် , ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းများကြောင့် ဒုက္ခတွေ့ခြင်း ၊ ရုတ်တရက် အငိုက်မိ တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ မမျှော်လင့်သော ကံကြမ္မာဆုံး ဗြုန်းကနဲ ကျရောက်ခြင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့ခြင်း များကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် “Current of Destiny” (16) ဖြစ်နေခြင်း ၊ ကုံရာသီ (အသက်တိုတတ်သောရာသီ)တွင် မွေးဖွားခြင်း၊ စနေ နှင့် (4)ဂဏန်း ရန်ကျနေခြင်း စသော အချက်တွေ ပေါင်းဆုံသွားတဲ့အခါ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဥပစ္ဆေဒကကံ နဲ့ ကွယ်လွန်သွားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ နာမည် ကိစ္စ ။ ငယ်နာမည်က “မောင်ထိန်လင်း” တဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ဒီနာမည်က မတွင်ဘူး။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀မှာတော့ “ကိုအောင်ဆန်း” “သခင်အောင်ဆန်း” လို့ လူသိများလာတယ်။ နောက် ရဲဘော်သုံးကျိပ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတော့ “ဗိုလ်တေဇ”။
ဒီနေရာမှာ ကံတရားရဲ့ ထူးဆန်းမှုလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် အားလုံးနီးပါးလောက်ဟာ သူတို့ ရဲဘော်သုံးကျိပ် ၀င်တုန်းက နာမည် တွေဖြစ်ကြတဲ့ “ဗိုလ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်ဗလ၊ ဗိုလ်လက်ယာ၊ ဗိုလ်စင်္ကြာ၊ ဗိုလ်ကျော်ဇော . . စတဲ့ နာမည်တွေကို ဆက်ယူကြပြီး ဒီ နာမည်တွေဟာ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အတည်ဖြစ် သွားခဲ့ကြပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ “ဗိုလ်တေဇ” ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဆက်မယူဘဲ မူလ “ဗိုလ်အောင်ဆန်း” ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုဘဲ ပြန်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ဘဲ ထူးထူးခြားခြား မူလနာမည်ကို ပြန်သုံးဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါဟာ ကံတရားတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်မလားခင်ဗျာ ?
မဟာဘုတ်သမား အတော်များများ သိကြတဲ့ အတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ဟာ (၂)ကြွင်းဖွား ဖြစ်လေတော့ “အောင်ဆန်း” ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ “အထွန်း+ပုတိ” ပက္ခတ် မိနေပါတယ်။ ပက္ခတ်တွေအကြောင်း ကျွန်တော်သေသေချာချာ လေ့လာကြည့်တော့ “ပက္ခတ်” တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု အဆိုးပေးမှုခြင်း သိပ်မတူကြတာကို သွားတွေ့ရပါတယ်။ အောက်မှာ ကြည့်ပါ။
အခု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိထားတဲ့ “ပက္ခတ်” က အထွန်း+ပုတိ ပက္ခတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပက္ခတ်ဟာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့ ကိစ္စကို အတော်အားပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ခေါင်းဆောင်အတော်များများဟာ ဒီ ပက္ခတ်မျိုး ညိနေကြတာ များပါတယ်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတစ်ဦးမှာ ဒီလို ပက္ခတ်မျိုး မိနေခဲ့ရင် စိုးရိမ်စရာ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ သာမန်လူတောင်မှ ဒီပက္ခတ်မျိုးဟာ ကိုယ့်ကို အလုပ်ပြုတ်၊ စီးပွားပျက်အောင် လုပ်ကြံ ဂျောက်တွန်းခံရတာမျိုး ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်ဘ၀က နာမည်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်တေဇ ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ယူပြီး “ဗိုလ်ချုပ်တေဇ” လို့သာ အမည်တွင် ခဲ့ရင်တော့ ဒီကံကြမ္မာဟာ လွတ်ကောင်းလွတ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံတရားက ဒီလို ခွင့်ပြုခဲ့ဟန် မတူပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက “သက္ခတ်” ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ အသက် (၃၃)ထဲမှာ လုပ်ကြံခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ စနေသား ဖြစ်လို့ “စနေ” သက္ခတ်ပါ။ ဒုက္ခပေးတဲ့ “အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ” လို့ ကျွန်တော် မကြာခဏ ရေးခဲ့သလို “စနေ” သက္ခတ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ သက္ခတ်ဖြစ်ပေမယ့် အလွတ် မပေးပါ။ ငဲ့ညှာမှု မရှိပါ။
ဒီလိုဆို အရင့်အရင် “စနေ” သက္ခတ်တွေတုန်းကလည်း ဖြစ်ပါလား ? လို့ ဆိုစရာ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပါ။ အနီးဆုံး အသက်ဖြစ်တဲ့ အသက် (၂၅)နှစ်ဟာလည်း စနေ သက္ခတ် ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက “ဂြိုဟ်စားကာလ” က “ကြာသပတေးဂြိုဟ်စား” ဖြစ်တယ်။ ကြာသပတေးဟာ မရဏဂြိုဟ်ဖြစ်ပေမယ့် စနေနဲ့ ဆက်သွယ်မှု မရှိဘူး။ နောက် (၃၃)နှစ်ကျတော့ “ရာဟုဂြိုဟ်စား” ကာလ ဖြစ်လာ တယ်။ ရာဟုဟာ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မဟာဘုတ်တိုင်မှာ “သိုက်” မှာ ရှိနေတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီရာဟုဟာ မွေးနံ လည်းဖြစ် “သက္ခတ်”လည်းဖြစ် တဲ့ “စနေ” ဂြိုဟ်နဲ့ ပက္ခတ် မိမနေဘူးလားခင်ဗျာ။ အောက်ကပုံကို ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
ဒါကြောင့် နာမည်ပက္ခတ် မိထားတဲ့လူတွေ အကြောက်ရဆုံး အချိန်/ကာလဟာ “ဂြိုဟ်စားကာလကြီး” နဲ့ “သက္ခတ်” တို့ အပြန်အလှန် ပက္ခတ်ကျတဲ့ နှစ်ပိုင်းတွေ ဖြစ်တာကို (ဒီသုတေသနအပြီး) နောက်ပိုင်း ဆက်လေ့လာတဲ့ သုတေသနများအရ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျဆုံးကွယ်လွန်ခဲ့ရခြင်းဟာ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးအတွက် လုံးဝအစာထိုးလို့ မရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီး ဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် ကံတရားရဲ့ အလိုအတိုင်း ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုမို့သာ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဒီလို နှစ်၊ လ၊ ရက်မျိုးမှာ မွေးပြီး ဒီလို နာမည်မျိုးကို မှည့်မိခြင်းလို့လည်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဖြေသိမ့် ကြည့်တာပေါ့လေ။
ဒါကတော့ Numerology ပညာ နဲ့ မဟာဘုတ် ပညာတို့ပေါင်းစပ်ပြီး ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ် ထားတဲ့ ဗေဒင်ဆောင်းပါး တစ်ခုပါ။ ဒီထက် အဆင့်မြင့်မြင့် “နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာ” နဲ့ သုံးသပ်တင်ပြထားတာကို ဖတ်ချင်ရင်တော့ “ဆရာ ဘဲလားလေဘာတီ” ရေးထားတဲ့ “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အကြောင်းတရား” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးဆီကို လင့်ခ် သွားပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီး သွားလိုက်ပါ။
ဖတ်ရှုသူအပေါင်း ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ လွမ်းဆွတ်နိုင်ကြပါစေ။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ ခုနှစ် /နှစ်သစ် ဟောကိန်းများPublished April 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ပြီးခဲ့တဲ့ (၄)လ လောက်က ခရစ်နှစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ် “ခရစ်နှစ်သစ်” ဟောကိန်းများ ရေးပြီး အခုတစ်ခါ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၇၂ ခုနှစ် “မြန်မာနှစ်သစ်” အတွက် ဟောကိန်းများ ရေးရပြန်ပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ ဗေဒင်ဆြာ တွေလည်း သိပ်မလွယ်လှဘူးနော။ တော်ကြာ အင်္ဂလိပ်နှစ်သစ်အတွက် ဟောကိန်းများ ဆိုပြီး ရေးလို့မှ မကြာသေးခင် အခု မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ဟောကိန်းများ ဆိုပြီး ရေးရပြန်ရော။ တော်သေးတယ်။ တရုပ်နှစ်သစ်ကူး ၊ ကုလား နှစ်သစ်ကူး။ ကရင် နှစ်သစ်ကူးတွေပါ မတောင်းဆိုကြလို့ပေါ့။
တကယ်တော့ ကမ္ဘာ့လူသား သန်း (၆၀၀၀) ကျော်အတွက် “တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး . . . ဆိုတဲ့ နေ့(၇)နေ့နဲ့ “ချုပ်” ပြီး အကျုံးဝင်အောင် ရေးရတာ မလွယ်လှပါဘူး။ လူတိုင်းအတွက် မှန်ဖို့လည်း မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် အားထုတ်ပြီး ရေးထား ပါတယ်။ နေ့ (၇)နေ့ ဟောကိန်းကို “မဟာဘုတ်” “မဟာကာလကြီး” “အရှေ့တိုင်း နက္ခတ်” နည်းစနစ်များနဲ့ ညှိနှိုင်း ထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့် ကြရအောင်လားဗျာ။
မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၂) အတွက် ၇ရက်သားသမီး ကံဇာတာ အကျဉ်းချုပ်
တနင်္ဂနွေ နှင့် စနေ သားသမီးများ
ကံဇာတာ အလွန် ညံ့ဖျင်းဖွယ်။
ကံဇာတာ အတော်အတန် ညံ့။
ကြာသပတေး နှင့် သောကြာ သားသမီးများ
ကံဇာတာ သင့်မြတ်။ သောကြာသားသမီးများ Accident ရှိ။
ဗုဒ္ဓဟူး နှင့် ရာဟု သားသမီးများ
Posted in မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, နှစ်ကူး ဗေဒင်, နှစ်ဆန်း ဗေဒင်	# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁)Published March 10, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ, အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 16 Comments	# ဇန်န၀ါရီလအတွက် (၇)နေ့ ဗေဒင်Published January 10, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	ယခုလ ဇန်န၀ါရီလဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမဆုံးလ လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလထဲမှာ ထူးခြားတာက (၇)ရက်သားသမီးများအနက် “ဗုဒ္ဓဟူး နဲ့ ရာဟု သားသမီး” များသာ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်နေ့ သားမီး များမှာ အကောင်း နဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲ နေကြမယ့် လ, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းအား/ဆိုးအား ပြင်းထန်မှုတော့ သိပ်မရှိ လှပါဘူး။ သက္ခတ် အညံ့ထဲမှာ ရှိမနေသူများ သာမန်အညံ့ လောက်ပါဘဲ။ သက္ခတ် ကောင်းမှာ ရောက်နေရင်တော့ အညံ့တောင်မှ သိပ်ပြီး မရှိ နိုင်ပါဘူး။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |4Comments	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,617)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,344)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,198)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,015)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,045)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,357)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,183)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,696)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,734)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,394)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,353)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,191)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,149)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,132)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,454)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,398)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,019)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,904)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,743)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,742)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,289)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,892)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,772)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,740)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,607)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,555)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,349)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,148)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,083)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,036)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
2 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.